The Voice Of Somaliland: Orodyahankii Soomaaliya, Jaamac Karaaciin oo 30 sannadood kadib socdaal ku yimi dalkiisa Somaliland
Orodyahankii Soomaaliya, Jaamac Karaaciin oo 30 sannadood kadib socdaal ku yimi dalkiisa Somaliland
(Waridaad) - Orodyahankii caanka ahaa ee reer Somaliland, Jaamac Maxamed Aadan (Jaamac Karaaciin), haatanna ah Tababare caalami ah oo dhinaca orodada ah ayaa ku soo laabtay dalkiisa.
Somaliland, kadib markii uu muddo 30 sannadood ah.“Waxaa Illaahay mahaddii ah anigoo muddo 30 sannadood ah ka maqnaa.
Somaliland inaan ku soo noqday dalkaygii hooyo. Waxaan imi maalintii Ciidda [Fadriga] ka horreysey, wakhti khayr leh baan ku soo beegmay,” ayuu yidhi Jaamac Karaaciin oo weriyayaasha ugu warramayey Hargeysa.
Waxana uu sheegay inuu u yimi inuu soo booqdo waalidkii oo uu sheegay in aanu muddo arag iyo inuu soo indhaindheeyo dalka oo uu sheegay in marar badan laga shakisiiyey ammaankiisa.
Jaamac Karaaciin oo intii uu dalka joogey ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer, waxa uu sheegay in uu la kulmay maamulka Ciyaaraha Gobolka Togdheer iyo Badhasaab ku xigeenka Gobolka oo uu sheegay inay si fiican u soo dhoweeyeen, isaga oo sheegay inay u qabteen Koob [tartan kubadeed] oo ay ku soo dhoweynayaan. Waxana uu sheegay inay ka wadahadleen sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha gobolka Togdheer.
Waxa kale oo uu sheegay inuu la kulmay muddadii uu Burco joogey Hayaan Xuseen oo ahaa orodyahan Soomaaliyadii burburtay ugu horreeyey orodhka dheer, haatanna ku nool gobolka Togdheer, kaas oo uu sheegay inay ka wadahadleen sidii loo caawin lahaa, loona horumarin lahaa ciyaaraha gobolka Togdheer, gaar ahaan, orodada oo uu sheegay in gobolku caan ku ahaa, aadna ugu fiicnaa, isaga oo xusay in dhinaca kubadda cagta uu gobolku aad ugu fiican yahay.
Intii uu Hargeysa joogey, Jaamac Karaaciin, waxa uu kulamo la yeeshay Madaxweynekuxigeenka Somaliland, mudane Axmed Yuusuf Yaasiin iyo wasiirro xukuumadda ka tirsan oo uu ka mid yahay Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, mudane Maxamuud Siciid; waxana uu sheegay in dhammaantood masuuliyiintaas ay ka wadahadleen arrimaha Isboortiga Somaliland iyo wixii uu kala qaban karayo horumarintiisa.
“Waayo, anigu Siyaasi ma ihi, safiirkaa Somaliland ee dibadda wareegaya ayaan ahay oo ninku hadduu Isboorti yahay oo uu marba meel tegayo waa safiir,” ayuu yidhi Jaamac Karaaciin.Sidaa darteed, waxa uu sheegay inay ka wada sheekaysteen masuuliyiintaas arrimo badan oo khuseeya ciyaaraha iyo waxa uu ka qaban karo.
“Xitaa waxaanu isku deyeynaa inay Somaliland ahaan uga qaybgalaan Ciyaaraha East Africa [Afrikada Bari], haddii taasi ay suuragashona kadibna aanu Carabta ula tagno, dabadeedna aanu halkaa ka soo galo Sport and Politics [ciyaaraha iyo siyaasadda],” ayuu raaciyey Jaamac Karaaciin.
Waxana uu sheegay inuu arrintaa xoogga saarayo iyo sidii uu tababaro iyo taakulayn kaleba ugu raadin lahaa ciyaaraha
Somaliland.Jaamac Karaaciin oo 70neeyadii haystey orodka Soomaaliya, waxa uu tababare dhinaca orodada ah ka soo noqday dalal kala duwan oo dunida ah, waxana uu sannadihii u dambeeyey ku sugnaa dalka Suudaan oo uu la taliye u yahay dhinaca orodada.
Jaamac Karaaciin, waxa uu sheegay in dalal kale oo badani ay hadda doonayaan inuu la taliye u noqdo, kadib markii ayuu yidhi ay arkeen heerka ay Suudaan ka gaadhey orodka oo ay hadda noqotay dalka Saddexaad ee dunida, isla markaana uu hadda heshiis la saxeexday dalka Liibiya, sidoo kale, dalal kale oo ay ka mid yihiin Cumaan, Kuweyd iyo Yemen ay iyaguna soo dalbadeen inuu tababare u noqdo.